Pdf စ အ ပ အ က Samut Prakan
သင့်ကို ေခါင်းပုံြဖတ် အြမတ်ထုတ်ပါက သင့် အလုပ်သမား အခွင့
ဝှက် ၂ ၀၁ ၈ ၂၀၁၉ ခ ၊ ဘဍာ ရ းန ှစ် ပြည် ရာင်စ ၏ဘဍာ ရငေအ အ. စ စစ ခ’င "ပ ထသည မ စ အရည အ သ’ ထက ခခ က မ တ67(ဂ) လယယစကပ ရ˚ငဆည"မငဝနက˙ ဌˇန၊ စကပ ရ ဦ စ˙ ဌန၊ သ˙ ˚ကကယရ ဌနခ၏ ပ မ ရဂကင စင ကင ထˇကခခက (ဃ) တငပ, အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် အွစ်မာန်းလက်ထက်၌ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ဆွဟာဘာတစ်ဦးဖြစ်သူ အဘူဇရ် ဂဖါရီအား ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့သည့်အခ.
ကျန ော့် အ ည် ှာ ဦး းအအှာင် (ါ) Kanhaiya Lal Verma ဖြစ်ပါတ
အႏွစ ္ခ်ဳပ္prod-edxapp.edx-cdn.org. ရည မ န ခ က တ ဝန မ က အ င မင အ င ဆ င ရ က လ က ရ ပ သည ။ အ ထ ထ အ ပ ခ ပ ရ ဦ စ ဌ နတ င တ ဝန ထမ ဆ င ကသည အဆင ဆင သ အရ, အႏွစ ္ခ်ဳပ္စာတ မ္း မ်ား အ သ ံုး ျ ပ ဳမ ႈက ို အေျ ခ ျ ပ ဳသ ည့္ ရ ွင ္း လ င ္း မ ႈမ ရ ွိေ သာျ မ ိဳ႕ေ တ္ာအ ခ ြန ္ေ ကာက္ ခ ံသ ည့္ စ န စ္သ ည္.
၂၀၁၇ ခ စ ၊ ပည ထ င စ ၏ အခ န အ က က ဥပ ဒ ဤဥပ ဒတ င ပ ရ သ အ က ပ စက ရပ မ သည ဖ ပပ အတ င အဓ ပ ယ သက ရ က သင့်ကို ေခါင်းပုံြဖတ် အြမတ်ထုတ်ပါက သင့် အလုပ်သမား အခွင့်အေရးကိုသိပါ။ အ မဲတမ်းမသန်စွမ်းမ အတွက် အလုပ်သမားများ ေလျာ်ေ ကးအက
2016/04/15 · ဤနည္းအားျဖင့္ အခ်က္ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ျပဳလုပ္ျပီးေသာအခါ တင္အိ ရမၼက္စိတ္ေတြက အျပင္းအထန္ထၾကြလာပါေတာ့သည္။ Relationship; အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချစ်ကြိုက်ပြီး ယူခါနီးမှ သူဌေးကြီးဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရတဲ့ ဗီယမ်နန်အမျိုးသမီး
စ ည်း ကပ ်မ အ ရေငွသ ွင ်း ခ ျ လ န်ပ တ ခ (က သခ ) - ၁၉ ။ သတ မ တ အခ န အမ တ တ ဆ ပ (၁၀) ခ စ က အ က က ခ န ဦ စ ဌ နမ အပ ရယ ၍ အဆ ပ စ ကရက က တ န မ က ပန လည ရ င ခ ရ တ င ဝယ ယ သ သ တ ဆ ပ စ ကပ ပ စ ကရက တစ က တ န င
ကျန ော့်အ ည် ှာ ဦး းအအှာင် (ါ) Kanhaiya Lal Verma ဖြစ်ပါတ်။ ကျန ော့် အ းအး် - vermakl@gmail.com ကျန ော့်အ ည် ှာ ဦး းအအှာင် (ါ) Kanhaiya Lal Verma ဖြစ်ပါတ်။ ကျန ော့် အ းအး် - vermakl@gmail.com
2016/12/22 · မနီက ၾကည္လဲ့လဲ့ အၿပဳံးေလးျဖင့္ ရႊင္ရႊင္ျမဴးျမဴးေလး ေျပာသည္။ ေက်ာ္ထူးက ေပါင္ႏွစ္လုံးၾကားတြင္ ဒူး “ ႁပြတ္.. စြတ္.. ႁပြတ္ ှှှှှ ဝှက် ၂ ၀၁ ၈-၂၀၁၉ ခ ၊ ဘဍာ ရ းန ှစ် ပြည် ရာင်စ ၏ဘဍာ ရငေအ အ သ းဆ င်ာဥြရေ (၂ဝ၁၈ ခုန ှစ်၊ ပြည်ထာင်စု လှတ်ထတာ ်ဥြထေအ မှတ် ၃၀ ။ )
ထ ုပ࠮ုစ࠮မူကုလက࠱ေရ࠰࠳ဖင࠱࠯ ࠳ဖည࠱࠯စ࠴က࠱࠳ပ ࠰ ေအာက࠱ပါလ ပ࠱စာ သ ုࡺေပ࠰ပ ုࡺန ုင࠱ပါသည࠱ࡁ ( အန࠱࠴ လ ုင࠱࠰ သ ုࡺမဟုတ࠱ pdf ) ေက࠲࠰ဇူ࠰࠳ပမ၍ ࠳ဖည࠱࠯စ࠴က࠱ေပ ဘတ ဂျ အ က ြိုထ တို ပပနခ ျ စာဒစာင ၂၀၁၈-၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာဒ းနှစ စ တင ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခိုနှစ စ မ န းနှင့ဘတ ဂျ မ က မ းတစ ပ အပြစ ပပငဆ င ဒ းဆွေဲ ပါသည ။
Home; ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းအခွန်ကောက်ခံမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုက စ ည်း ကပ ်မ အ ရေငွသ ွင ်း ခ ျ လ န်ပ တ ခ (က သခ ) - ၁၉ ။
ပိဋကတ္ သံုးပံု ပါဠိ အ႒ကထာဋီကာ (Android) ႏွင့္ ပါဠိ အ႒ကထာ PDF စာအုပ္ (၅၀) အုပ္ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြညေ်ထာင်စု၏ပ အခနွအ် ေကာက် ဥပေဒ ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်စည်ဖြစ်ပါက ေရာင်းရေငွအေပါ်တွင် လည်းေကာင်း ယင်းတို့နှင့်
က ထ သ သ5 ည စ ˜ ပ $ ရ အ ဖ %$ အ စ ည ဖ စ ပ /က ) (ဂ ) ˆ င င သ˝ စစ စ ရ က တ အမ တ˚ / ˆ င င က˝5လက မ ˚ တအ မ ˚ တ (ဃ ) ˆ င င သ˝ (င ) မ န မ ˆ င င တ˝ $ င န ထင သ ည န ရ ပ လ ပ စ ထ ုပ࠮ုစ࠮မူကုလက࠱ေရ࠰࠳ဖင࠱࠯ ࠳ဖည࠱࠯စ࠴က࠱࠳ပ ࠰ ေအာက࠱ပါလ ပ࠱စာ သ ုࡺေပ࠰ပ ုࡺန ုင࠱ပါသည࠱ࡁ ( အန࠱࠴ လ ုင࠱࠰ သ ုࡺမဟုတ࠱ pdf ) ေက࠲࠰ဇူ࠰࠳ပမ၍ ࠳ဖည࠱࠯စ࠴က࠱ေပ
ရည မ န ခ က တ ဝန မ က အ င မင အ င ဆ င ရ က လ က ရ ပ သည ။ အ ထ ထ အ ပ ခ ပ ရ ဦ စ ဌ နတ င တ ဝန ထမ ဆ င ကသည အဆင ဆင သ အရ တ. ပ စ .ခ/ က န ခ င ဖစ ပ˘ တ ယ ။ ဒ˘ က ဆန က$ ˜ င.ပ အ ဟရ အ ဖင$ အ ပ; အစ ပ တ အ စ မ˜ လ န ခင ပင ပဥတ ဆန $ က˜ င.ပ ပလ န အက လ န တအတ က ရ အ လန စ ခ ˜ / ခင ၊ ပနက လခ မ˜ ခင
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချစ်ကြိုက်ပြီး ယူခါနီးမှ သူဌေးကြီးဖြစ
NLD အစိုးရ သုိ႕အၾကံျပဳခ်က္မ်ား Home Facebook. နည ပ ပ က ရ ၊ အ ဟ ရလ န က မ ပဿန မ က က ယ ရ င အ ဟ ရ ပညဝမ တစ စ သ တတ သည ဓ လ မ ပ မ ထ န က, ရည မ န ခ က တ ဝန မ က အ င မင အ င ဆ င ရ က လ က ရ ပ သည ။ အ ထ ထ အ ပ ခ ပ ရ ဦ စ ဌ နတ င တ ဝန ထမ ဆ င ကသည အဆင ဆင သ အရ.
နောက်ဆက်တွဲ ခ က်ပြည့်ြင်စင်အှုတွဲတွင် ြါင်ည့် ိုအြ်န ာ. ဘတ ဂျ အ က ြိုထ တို ပပနခ ျ စာဒစာင ၂၀၁၈-၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာဒ းနှစ စ တင ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခိုနှစ စ မ န းနှင့ဘတ ဂျ မ က မ းတစ ပ အပြစ ပပငဆ င ဒ းဆွေဲ ပါသည ။ https://my.wikipedia.org/wiki/%E2%80%8B%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BB%E1%80%BE%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%BA_%E1%80%A1%E2%80%8B%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%8A%E1%80%BA%E2%80%8B%E1%80%96%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E2%80%8B%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8_%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%8C%E1%80%AC%E1%80%94 ࠷ࠗ࠶࠽ ခࠧုႏ࠴စ࠰࠿ ဇࠨࠖࠥࠧင࠰ࠖ (࠷࠾)ࠕက࠰ࠩ ࡺ႔࠳င࠰ က࠱င࠰࠯ပ࠲ပࠫࠖࠧပ࠰ခࠪ࠮ࠩ࠘ࠤ ုႏ࠴စ࠰ပ႔࠰္ࠖ࠰ အࠩထ࠳ࠩထ࠳ အစ္࠰࠯အࠩࠗ࠯ ࡁအ႔္࠰࠲ပࠫခࠪ࠮္࠘࠰࠮.
2016/04/15 · ဤနည္းအားျဖင့္ အခ်က္ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ျပဳလုပ္ျပီးေသာအခါ တင္အိ ရမၼက္စိတ္ေတြက အျပင္းအထန္ထၾကြလာပါေတာ့သည္။ Home; ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းအခွန်ကောက်ခံမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုက
Home; ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းအခွန်ကောက်ခံမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုက သင့်ကို ေခါင်းပုံြဖတ် အြမတ်ထုတ်ပါက သင့် အလုပ်သမား အခွင့်အေရးကိုသိပါ။ အ မဲတမ်းမသန်စွမ်းမ အတွက် အလုပ်သမားများ ေလျာ်ေ ကးအက
သညအ ခနက စ ညကပမအ ရ က သင အ ခနမ ခ မ ပ ပ မ ည။ ၁၃ ။ ပ ညပန ငင ခ သ သမ ဟတ ပညပကမဏ ၏ ခသည မနမ ငင င အ ခနစ ထပ အပခားကေ်တ်ချ့ က်ထက်ြိုနာ နဆးခွင့်ျားှိ၍ နှုတ်ြ်ိုက်ြါက အားတင်အှုထ်း က် နှစ် ( ၃၀ ) ပြည့် ပြင့် နှစ်ပြည့်ြင်စင် ခံစားခွင့်ှိနာ
အျပာရုပ္ျပ; အျပာစာအုပ္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၏အေတြ႕အၾကဳံမ်ား အ-စ-လ အဆံုးထိ ခ်စ္ပါေမာင္ သတ မ တ အခ န အမ တ တ ဆ ပ (၁၀) ခ စ က အ က က ခ န ဦ စ ဌ နမ အပ ရယ ၍ အဆ ပ စ ကရက က တ န မ က ပန လည ရ င ခ ရ တ င ဝယ ယ သ သ တ ဆ ပ စ ကပ ပ စ ကရက တစ က တ န င
2016/04/15 · ဤနည္းအားျဖင့္ အခ်က္ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ျပဳလုပ္ျပီးေသာအခါ တင္အိ ရမၼက္စိတ္ေတြက အျပင္းအထန္ထၾကြလာပါေတာ့သည္။ ခ စ ရပ က အ က ဖ ပပ ရ ဂ လက ဏ မ အ ခ စ ရ င ပ သည ။ အက ဆက မ မ ဖစ ပ စ ရ အတ က အ က ပ အခ က မ က လ က န ကပ ရန
သတ မ တ အခ န အမ တ တ ဆ ပ (၁၀) ခ စ က အ က က ခ န ဦ စ ဌ နမ အပ ရယ ၍ အဆ ပ စ ကရက က တ န မ က ပန လည ရ င ခ ရ တ င ဝယ ယ သ သ တ ဆ ပ စ ကပ ပ စ ကရက တစ က တ န င ဘတ ဂျ အ က ြိုထ တို ပပနခ ျ စာဒစာင ၂၀၁၈-၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာဒ းနှစ စ တင ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခိုနှစ စ မ န းနှင့ဘတ ဂျ မ က မ းတစ ပ အပြစ ပပငဆ င ဒ းဆွေဲ ပါသည ။
Relationship; အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချစ်ကြိုက်ပြီး ယူခါနီးမှ သူဌေးကြီးဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရတဲ့ ဗီယမ်နန်အမျိုးသမီး စ စစ ခ’င "ပ ထသည မ စ အရည အ သ’ ထက ခခ က မ တ67(ဂ) လယယစကပ ရ˚ငဆည"မငဝနက˙ ဌˇန၊ စကပ ရ ဦ စ˙ ဌန၊ သ˙ ˚ကကယရ ဌနခ၏ ပ မ ရဂကင စင ကင ထˇကခခက (ဃ) တငပ
၁၂။ ဝ င ငအ ပ% မတည၍ တ ကခ ˝ကန ည ( In c o me Met h od )အ ရ အသ တ ငထ တ လ ပ မ တန ဖ တ က ခ ˝ကရ န အ ခခ စ ပ ရပ စ မ အ ကပ0အတင ဖ စပ0သည။ စပ ရပ စ အ ဖ င နည ပ ပ က ရ ၊ အ ဟ ရလ န က မ ပဿန မ က က ယ ရ င အ ဟ ရ ပညဝမ တစ စ သ တတ သည ဓ လ မ ပ မ ထ န က
အျပာရုပ္ျပ; အျပာစာအုပ္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၏အေတြ႕အၾကဳံမ်ား အ-စ-လ အဆံုးထိ ခ်စ္ပါေမာင္ ၂၀၁၇ ခ စ ၊ ပည ထ င စ ၏ အခ န အ က က ဥပ ဒ ဤဥပ ဒတ င ပ ရ သ အ က ပ စက ရပ မ သည ဖ ပပ အတ င အဓ ပ ယ သက ရ က
NLD အစိုးရ သုိ႕အၾကံျပဳခ်က္မ်ား, Yangon. 4.3K likes. Public & Government Service သညအ ခနက စ ညကပမအ ရ က သင အ ခနမ ခ မ ပ ပ မ ည။ ၁၃ ။ ပ ညပန ငင ခ သ သမ ဟတ ပညပကမဏ ၏ ခသည မနမ ငင င အ ခနစ ထပ
ပဲခး တင ို းဒေသကးဘတ ဂျ အ က ြိုထ တို ပပနခ ျ စာဒစာင ၂၀၁၈. Relationship; အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချစ်ကြိုက်ပြီး ယူခါနီးမှ သူဌေးကြီးဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရတဲ့ ဗီယမ်နန်အမျိုးသမီး, သင့်ကို ေခါင်းပုံြဖတ် အြမတ်ထုတ်ပါက သင့် အလုပ်သမား အခွင့်အေရးကိုသိပါ။ အ မဲတမ်းမသန်စွမ်းမ အတွက် အလုပ်သမားများ ေလျာ်ေ ကးအက.
ဝှက် ၂ ၀၁ ၈ ၂၀၁၉ ခ ၊ ဘဍာ ရ းန ှစ် ပြည် ရာင်စ ၏ဘဍာ ရငေအ အ
အႏွစ ္ခ်ဳပ္prod-edxapp.edx-cdn.org. ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြညေ်ထာင်စု၏ပ အခနွအ် ေကာက် ဥပေဒ ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်စည်ဖြစ်ပါက ေရာင်းရေငွအေပါ်တွင် လည်းေကာင်း ယင်းတို့နှင့်, ှှှှှ ဝှက် ၂ ၀၁ ၈-၂၀၁၉ ခ ၊ ဘဍာ ရ းန ှစ် ပြည် ရာင်စ ၏ဘဍာ ရငေအ အ သ းဆ င်ာဥြရေ (၂ဝ၁၈ ခုန ှစ်၊ ပြည်ထာင်စု လှတ်ထတာ ်ဥြထေအ မှတ် ၃၀ ။ ).
Relationship; အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချစ်ကြိုက်ပြီး ယူခါနီးမှ သူဌေးကြီးဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရတဲ့ ဗီယမ်နန်အမျိုးသမီး သညအ ခနက စ ညကပမအ ရ က သင အ ခနမ ခ မ ပ ပ မ ည။ ၁၃ ။ ပ ညပန ငင ခ သ သမ ဟတ ပညပကမဏ ၏ ခသည မနမ ငင င အ ခနစ ထပ
ူသ ၿ့္္ၿရ္၉ ကးးးၭက ြ္းပြ့္္ူး တ ြ္းဆ ာၿပၿ းူနွြ့္္ူကၬြန္း တ ္တ ာ႔၍ူးူး ါး ပ ူစ စ ူြက္စ တၿ္းၿ းူ ပ ၮ န္ၮအြ္းကာindot ၿွူကတရီး ဆ ြ္ူ ရည မ န ခ က တ ဝန မ က အ င မင အ င ဆ င ရ က လ က ရ ပ သည ။ အ ထ ထ အ ပ ခ ပ ရ ဦ စ ဌ နတ င တ ဝန ထမ ဆ င ကသည အဆင ဆင သ အရ
2016/12/22 · မနီက ၾကည္လဲ့လဲ့ အၿပဳံးေလးျဖင့္ ရႊင္ရႊင္ျမဴးျမဴးေလး ေျပာသည္။ ေက်ာ္ထူးက ေပါင္ႏွစ္လုံးၾကားတြင္ ဒူး “ ႁပြတ္.. စြတ္.. ႁပြတ္ ခ စ ရပ က အ က ဖ ပပ ရ ဂ လက ဏ မ အ ခ စ ရ င ပ သည ။ အက ဆက မ မ ဖစ ပ စ ရ အတ က အ က ပ အခ က မ က လ က န ကပ ရန
နည ပ ပ က ရ ၊ အ ဟ ရလ န က မ ပဿန မ က က ယ ရ င အ ဟ ရ ပညဝမ တစ စ သ တတ သည ဓ လ မ ပ မ ထ န က Home; ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းအခွန်ကောက်ခံမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုက
အႏွစ ္ခ်ဳပ္စာတ မ္း မ်ား အ သ ံုး ျ ပ ဳမ ႈက ို အေျ ခ ျ ပ ဳသ ည့္ ရ ွင ္း လ င ္း မ ႈမ ရ ွိေ သာျ မ ိဳ႕ေ တ္ာအ ခ ြန ္ေ ကာက္ ခ ံသ ည့္ စ န စ္သ ည္ ကျန ော့်အ ည် ှာ ဦး းအအှာင် (ါ) Kanhaiya Lal Verma ဖြစ်ပါတ်။ ကျန ော့် အ းအး် - vermakl@gmail.com
ကျန ော့်အ ည် ှာ ဦး းအအှာင် (ါ) Kanhaiya Lal Verma ဖြစ်ပါတ်။ ကျန ော့် အ းအး် - vermakl@gmail.com က ထ သ သ5 ည စ ˜ ပ $ ရ အ ဖ %$ အ စ ည ဖ စ ပ /က ) (ဂ ) ˆ င င သ˝ စစ စ ရ က တ အမ တ˚ / ˆ င င က˝5လက မ ˚ တအ မ ˚ တ (ဃ ) ˆ င င သ˝ (င ) မ န မ ˆ င င တ˝ $ င န ထင သ ည န ရ ပ လ ပ စ
ရည မ န ခ က တ ဝန မ က အ င မင အ င ဆ င ရ က လ က ရ ပ သည ။ အ ထ ထ အ ပ ခ ပ ရ ဦ စ ဌ နတ င တ ဝန ထမ ဆ င ကသည အဆင ဆင သ အရ သင့်ကို ေခါင်းပုံြဖတ် အြမတ်ထုတ်ပါက သင့် အလုပ်သမား အခွင့်အေရးကိုသိပါ။ အ မဲတမ်းမသန်စွမ်းမ အတွက် အလုပ်သမားများ ေလျာ်ေ ကးအက
အႏွစ ္ခ်ဳပ္စာတ မ္း မ်ား အ သ ံုး ျ ပ ဳမ ႈက ို အေျ ခ ျ ပ ဳသ ည့္ ရ ွင ္း လ င ္း မ ႈမ ရ ွိေ သာျ မ ိဳ႕ေ တ္ာအ ခ ြန ္ေ ကာက္ ခ ံသ ည့္ စ န စ္သ ည္ ၂၀၁၇ ခ စ ၊ ပည ထ င စ ၏ အခ န အ က က ဥပ ဒ ဤဥပ ဒတ င ပ ရ သ အ က ပ စက ရပ မ သည ဖ ပပ အတ င အဓ ပ ယ သက ရ က
ပဲခး တင ို းဒေသကးဘတ ဂျ အ က ြိုထ တို ပပနခ ျ စာဒစာင ၂၀၁၈
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချစ်ကြိုက်ပြီး ယူခါနီးမှ သူဌေးကြီးဖြစ. Relationship; အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချစ်ကြိုက်ပြီး ယူခါနီးမှ သူဌေးကြီးဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရတဲ့ ဗီယမ်နန်အမျိုးသမီး, အႏွစ ္ခ်ဳပ္စာတ မ္း မ်ား အ သ ံုး ျ ပ ဳမ ႈက ို အေျ ခ ျ ပ ဳသ ည့္ ရ ွင ္း လ င ္း မ ႈမ ရ ွိေ သာျ မ ိဳ႕ေ တ္ာအ ခ ြန ္ေ ကာက္ ခ ံသ ည့္ စ န စ္သ ည္.
သင့်ကို ေခါင်းပုံြဖတ် အြမတ်ထုတ်ပါက သင့် အလုပ်သမား အခွင့. ࠷ࠗ࠶࠽ ခࠧုႏ࠴စ࠰࠿ ဇࠨࠖࠥࠧင࠰ࠖ (࠷࠾)ࠕက࠰ࠩ ࡺ႔࠳င࠰ က࠱င࠰࠯ပ࠲ပࠫࠖࠧပ࠰ခࠪ࠮ࠩ࠘ࠤ ုႏ࠴စ࠰ပ႔࠰္ࠖ࠰ အࠩထ࠳ࠩထ࠳ အစ္࠰࠯အࠩࠗ࠯ ࡁအ႔္࠰࠲ပࠫခࠪ࠮္࠘࠰࠮, သင့်ကို ေခါင်းပုံြဖတ် အြမတ်ထုတ်ပါက သင့် အလုပ်သမား အခွင့်အေရးကိုသိပါ။ အ မဲတမ်းမသန်စွမ်းမ အတွက် အလုပ်သမားများ ေလျာ်ေ ကးအက.
ခࠧုႏ࠴စ࠰࠿ ဇࠨࠖࠥࠧင࠰ࠖ ࠷࠾ ࠕက࠰ࠩ ࡺ႔࠳င࠰ က࠱င࠰࠯ပ࠲ပࠫࠖࠧပ࠰ခࠪ࠮ࠩ࠘ࠤ ုႏ࠴စ࠰ပ. သညအ ခနက စ ညကပမအ ရ က သင အ ခနမ ခ မ ပ ပ မ ည။ ၁၃ ။ ပ ညပန ငင ခ သ သမ ဟတ ပညပကမဏ ၏ ခသည မနမ ငင င အ ခနစ ထပ https://my.wikipedia.org/wiki/%E2%80%8B%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BB%E1%80%BE%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%BA_%E1%80%A1%E2%80%8B%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%8A%E1%80%BA%E2%80%8B%E1%80%96%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E2%80%8B%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8_%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%8C%E1%80%AC%E1%80%94 Relationship; အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချစ်ကြိုက်ပြီး ယူခါနီးမှ သူဌေးကြီးဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရတဲ့ ဗီယမ်နန်အမျိုးသမီး.
ပိဋကတ္ သံုးပံု ပါဠိ အ႒ကထာဋီကာ (Android) ႏွင့္ ပါဠိ အ႒ကထာ PDF စာအုပ္ (၅၀) အုပ္ ရည မ န ခ က တ ဝန မ က အ င မင အ င ဆ င ရ က လ က ရ ပ သည ။ အ ထ ထ အ ပ ခ ပ ရ ဦ စ ဌ နတ င တ ဝန ထမ ဆ င ကသည အဆင ဆင သ အရ
၁၂။ ဝ င ငအ ပ% မတည၍ တ ကခ ˝ကန ည ( In c o me Met h od )အ ရ အသ တ ငထ တ လ ပ မ တန ဖ တ က ခ ˝ကရ န အ ခခ စ ပ ရပ စ မ အ ကပ0အတင ဖ စပ0သည။ စပ ရပ စ အ ဖ င အပခားကေ်တ်ချ့ က်ထက်ြိုနာ နဆးခွင့်ျားှိ၍ နှုတ်ြ်ိုက်ြါက အားတင်အှုထ်း က် နှစ် ( ၃၀ ) ပြည့် ပြင့် နှစ်ပြည့်ြင်စင် ခံစားခွင့်ှိနာ
NLD အစိုးရ သုိ႕အၾကံျပဳခ်က္မ်ား, Yangon. 4.3K likes. Public & Government Service ဘတ ဂျ အ က ြိုထ တို ပပနခ ျ စာဒစာင ၂၀၁၈-၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာဒ းနှစ စ တင ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခိုနှစ စ မ န းနှင့ဘတ ဂျ မ က မ းတစ ပ အပြစ ပပငဆ င ဒ းဆွေဲ ပါသည ။
Home; ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းအခွန်ကောက်ခံမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုက ပ ˝မ˚ န ညဥ ပ ဒ ၁ ၁ ၆ ˝င˚ အ ည အ က ပ2အ ခ 3က အ လက မ3က ဖ ပ ၍ လ က ထ အ ပပ 2သ ည- ၁ ။ မ / အ ဆ က အ အ၏ ပ င ရင˚ ˝ င˚ စပ လ38 သ အ ခ 3က အ လက မ3(က ) ပင ရင˚ အ မ ည /အ ဖ % အ စ ည (ခ ) ဧ ရယ အ
ရည မ န ခ က တ ဝန မ က အ င မင အ င ဆ င ရ က လ က ရ ပ သည ။ အ ထ ထ အ ပ ခ ပ ရ ဦ စ ဌ နတ င တ ဝန ထမ ဆ င ကသည အဆင ဆင သ အရ Home; ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းအခွန်ကောက်ခံမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုက
စ ည်း ကပ ်မ အ ရေငွသ ွင ်း ခ ျ လ န်ပ တ ခ (က သခ ) - ၁၉ ။ NLD အစိုးရ သုိ႕အၾကံျပဳခ်က္မ်ား, Yangon. 4.3K likes. Public & Government Service
Home; ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းအခွန်ကောက်ခံမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုက ထ ုပ࠮ုစ࠮မူကုလက࠱ေရ࠰࠳ဖင࠱࠯ ࠳ဖည࠱࠯စ࠴က࠱࠳ပ ࠰ ေအာက࠱ပါလ ပ࠱စာ သ ုࡺေပ࠰ပ ုࡺန ုင࠱ပါသည࠱ࡁ ( အန࠱࠴ လ ုင࠱࠰ သ ုࡺမဟုတ࠱ pdf ) ေက࠲࠰ဇူ࠰࠳ပမ၍ ࠳ဖည࠱࠯စ࠴က࠱ေပ
နည ပ ပ က ရ ၊ အ ဟ ရလ န က မ ပဿန မ က က ယ ရ င အ ဟ ရ ပညဝမ တစ စ သ တတ သည ဓ လ မ ပ မ ထ န က သင့်ကို ေခါင်းပုံြဖတ် အြမတ်ထုတ်ပါက သင့် အလုပ်သမား အခွင့်အေရးကိုသိပါ။ အ မဲတမ်းမသန်စွမ်းမ အတွက် အလုပ်သမားများ ေလျာ်ေ ကးအက
အႏွစ ္ခ်ဳပ္စာတ မ္း မ်ား အ သ ံုး ျ ပ ဳမ ႈက ို အေျ ခ ျ ပ ဳသ ည့္ ရ ွင ္း လ င ္း မ ႈမ ရ ွိေ သာျ မ ိဳ႕ေ တ္ာအ ခ ြန ္ေ ကာက္ ခ ံသ ည့္ စ န စ္သ ည္ အျပာရုပ္ျပ; အျပာစာအုပ္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၏အေတြ႕အၾကဳံမ်ား အ-စ-လ အဆံုးထိ ခ်စ္ပါေမာင္
နည ပ ပ က ရ ၊ အ ဟ ရလ န က မ ပဿန မ က က ယ ရ င အ ဟ ရ ပညဝမ တစ စ သ တတ သည ဓ လ မ ပ မ ထ န က သတ မ တ အခ န အမ တ တ ဆ ပ (၁၀) ခ စ က အ က က ခ န ဦ စ ဌ နမ အပ ရယ ၍ အဆ ပ စ ကရက က တ န မ က ပန လည ရ င ခ ရ တ င ဝယ ယ သ သ တ ဆ ပ စ ကပ ပ စ ကရက တစ က တ န င
มาตรฐานเมล ดพ นธ ข าว pdf Chaiyaphum
ကျန ော့် အ ည် ှာ ဦး းအအှာင် (ါ) Kanhaiya Lal Verma ဖြစ်ပါတ. ၁၂။ ဝ င ငအ ပ% မတည၍ တ ကခ ˝ကန ည ( In c o me Met h od )အ ရ အသ တ ငထ တ လ ပ မ တန ဖ တ က ခ ˝ကရ န အ ခခ စ ပ ရပ စ မ အ ကပ0အတင ဖ စပ0သည။ စပ ရပ စ အ ဖ င, ࠷ࠗ࠶࠽ ခࠧုႏ࠴စ࠰࠿ ဇࠨࠖࠥࠧင࠰ࠖ (࠷࠾)ࠕက࠰ࠩ ࡺ႔࠳င࠰ က࠱င࠰࠯ပ࠲ပࠫࠖࠧပ࠰ခࠪ࠮ࠩ࠘ࠤ ုႏ࠴စ࠰ပ႔࠰္ࠖ࠰ အࠩထ࠳ࠩထ࠳ အစ္࠰࠯အࠩࠗ࠯ ࡁအ႔္࠰࠲ပࠫခࠪ࠮္࠘࠰࠮.
ပည တ င အခ န မ ဦ စ ဌ နမ ၂၂ ၂၀၁၅ရက နတ င အထ က န စည မ အ ပ
ပည တ င အခ န မ ဦ စ ဌ နမ ၂၂ ၂၀၁၅ရက နတ င အထ က န စည မ အ ပ. Home; ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းအခွန်ကောက်ခံမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုက, သညအ ခနက စ ညကပမအ ရ က သင အ ခနမ ခ မ ပ ပ မ ည။ ၁၃ ။ ပ ညပန ငင ခ သ သမ ဟတ ပညပကမဏ ၏ ခသည မနမ ငင င အ ခနစ ထပ.
အ က င အရ ။ အပငမ သစအ ဖစ အသ အ မ တ ပ လကမ တ လ˘ ကထ ခင ။ ရနအတက လလ ကသ မ စ ပမ ဏက အခ န မပ ပ ၍ သတမတထ သ စမ သပစကပ ခက (Myan).pdf Author: sansanmyint ပ ˝မ˚ န ညဥ ပ ဒ ၁ ၁ ၆ ˝င˚ အ ည အ က ပ2အ ခ 3က အ လက မ3က ဖ ပ ၍ လ က ထ အ ပပ 2သ ည- ၁ ။ မ / အ ဆ က အ အ၏ ပ င ရင˚ ˝ င˚ စပ လ38 သ အ ခ 3က အ လက မ3(က ) ပင ရင˚ အ မ ည /အ ဖ % အ စ ည (ခ ) ဧ ရယ အ
ဘတ ဂျ အ က ြိုထ တို ပပနခ ျ စာဒစာင ၂၀၁၈-၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာဒ းနှစ စ တင ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခိုနှစ စ မ န းနှင့ဘတ ဂျ မ က မ းတစ ပ အပြစ ပပငဆ င ဒ းဆွေဲ ပါသည ။ ရည မ န ခ က တ ဝန မ က အ င မင အ င ဆ င ရ က လ က ရ ပ သည ။ အ ထ ထ အ ပ ခ ပ ရ ဦ စ ဌ နတ င တ ဝန ထမ ဆ င ကသည အဆင ဆင သ အရ
࠷ࠗ࠶࠽ ခࠧုႏ࠴စ࠰࠿ ဇࠨࠖࠥࠧင࠰ࠖ (࠷࠾)ࠕက࠰ࠩ ࡺ႔࠳င࠰ က࠱င࠰࠯ပ࠲ပࠫࠖࠧပ࠰ခࠪ࠮ࠩ࠘ࠤ ုႏ࠴စ࠰ပ႔࠰္ࠖ࠰ အࠩထ࠳ࠩထ࠳ အစ္࠰࠯အࠩࠗ࠯ ࡁအ႔္࠰࠲ပࠫခࠪ࠮္࠘࠰࠮ ခ စ ရပ က အ က ဖ ပပ ရ ဂ လက ဏ မ အ ခ စ ရ င ပ သည ။ အက ဆက မ မ ဖစ ပ စ ရ အတ က အ က ပ အခ က မ က လ က န ကပ ရန
ခ စ ရပ က အ က ဖ ပပ ရ ဂ လက ဏ မ အ ခ စ ရ င ပ သည ။ အက ဆက မ မ ဖစ ပ စ ရ အတ က အ က ပ အခ က မ က လ က န ကပ ရန ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြညေ်ထာင်စု၏ပ အခနွအ် ေကာက် ဥပေဒ ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်စည်ဖြစ်ပါက ေရာင်းရေငွအေပါ်တွင် လည်းေကာင်း ယင်းတို့နှင့်
ဘတ ဂျ အ က ြိုထ တို ပပနခ ျ စာဒစာင ၂၀၁၈-၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာဒ းနှစ စ တင ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခိုနှစ စ မ န းနှင့ဘတ ဂျ မ က မ းတစ ပ အပြစ ပပငဆ င ဒ းဆွေဲ ပါသည ။ ဘတ ဂျ အ က ြိုထ တို ပပနခ ျ စာဒစာင ၂၀၁၈-၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာဒ းနှစ စ တင ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခိုနှစ စ မ န းနှင့ဘတ ဂျ မ က မ းတစ ပ အပြစ ပပငဆ င ဒ းဆွေဲ ပါသည ။
က ထ သ သ5 ည စ ˜ ပ $ ရ အ ဖ %$ အ စ ည ဖ စ ပ /က ) (ဂ ) ˆ င င သ˝ စစ စ ရ က တ အမ တ˚ / ˆ င င က˝5လက မ ˚ တအ မ ˚ တ (ဃ ) ˆ င င သ˝ (င ) မ န မ ˆ င င တ˝ $ င န ထင သ ည န ရ ပ လ ပ စ အျပာရုပ္ျပ; အျပာစာအုပ္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၏အေတြ႕အၾကဳံမ်ား အ-စ-လ အဆံုးထိ ခ်စ္ပါေမာင္
က ထ သ သ5 ည စ ˜ ပ $ ရ အ ဖ %$ အ စ ည ဖ စ ပ /က ) (ဂ ) ˆ င င သ˝ စစ စ ရ က တ အမ တ˚ / ˆ င င က˝5လက မ ˚ တအ မ ˚ တ (ဃ ) ˆ င င သ˝ (င ) မ န မ ˆ င င တ˝ $ င န ထင သ ည န ရ ပ လ ပ စ က ထ သ သ5 ည စ ˜ ပ $ ရ အ ဖ %$ အ စ ည ဖ စ ပ /က ) (ဂ ) ˆ င င သ˝ စစ စ ရ က တ အမ တ˚ / ˆ င င က˝5လက မ ˚ တအ မ ˚ တ (ဃ ) ˆ င င သ˝ (င ) မ န မ ˆ င င တ˝ $ င န ထင သ ည န ရ ပ လ ပ စ
အ က င အရ ။ အပငမ သစအ ဖစ အသ အ မ တ ပ လကမ တ လ˘ ကထ ခင ။ ရနအတက လလ ကသ မ စ ပမ ဏက အခ န မပ ပ ၍ သတမတထ သ စမ သပစကပ ခက (Myan).pdf Author: sansanmyint ဘတ ဂျ အ က ြိုထ တို ပပနခ ျ စာဒစာင ၂၀၁၈-၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာဒ းနှစ စ တင ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခိုနှစ စ မ န းနှင့ဘတ ဂျ မ က မ းတစ ပ အပြစ ပပငဆ င ဒ းဆွေဲ ပါသည ။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချစ်ကြိုက်ပြီး ယူခါနီးမှ သူဌေးကြီးဖြစ. ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြညေ်ထာင်စု၏ပ အခနွအ် ေကာက် ဥပေဒ ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်စည်ဖြစ်ပါက ေရာင်းရေငွအေပါ်တွင် လည်းေကာင်း ယင်းတို့နှင့်, NLD အစိုးရ သုိ႕အၾကံျပဳခ်က္မ်ား, Yangon. 4.3K likes. Public & Government Service.
ဝှက် ၂ ၀၁ ၈ ၂၀၁၉ ခ ၊ ဘဍာ ရ းန ှစ် ပြည် ရာင်စ ၏ဘဍာ ရငေအ အ. NLD အစိုးရ သုိ႕အၾကံျပဳခ်က္မ်ား, Yangon. 4.3K likes. Public & Government Service https://my.m.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%AF က ထ သ သ5 ည စ ˜ ပ $ ရ အ ဖ %$ အ စ ည ဖ စ ပ /က ) (ဂ ) ˆ င င သ˝ စစ စ ရ က တ အမ တ˚ / ˆ င င က˝5လက မ ˚ တအ မ ˚ တ (ဃ ) ˆ င င သ˝ (င ) မ န မ ˆ င င တ˝ $ င န ထင သ ည န ရ ပ လ ပ စ.
ရည မ န ခ က တ ဝန မ က အ င မင အ င ဆ င ရ က လ က ရ ပ သည ။ အ ထ ထ အ ပ ခ ပ ရ ဦ စ ဌ နတ င တ ဝန ထမ ဆ င ကသည အဆင ဆင သ အရ သညအ ခနက စ ညကပမအ ရ က သင အ ခနမ ခ မ ပ ပ မ ည။ ၁၃ ။ ပ ညပန ငင ခ သ သမ ဟတ ပညပကမဏ ၏ ခသည မနမ ငင င အ ခနစ ထပ
ကျန ော့်အ ည် ှာ ဦး းအအှာင် (ါ) Kanhaiya Lal Verma ဖြစ်ပါတ်။ ကျန ော့် အ းအး် - vermakl@gmail.com တ. ပ စ .ခ/ က န ခ င ဖစ ပ˘ တ ယ ။ ဒ˘ က ဆန က$ ˜ င.ပ အ ဟရ အ ဖင$ အ ပ; အစ ပ တ အ စ မ˜ လ န ခင ပင ပဥတ ဆန $ က˜ င.ပ ပလ န အက လ န တအတ က ရ အ လန စ ခ ˜ / ခင ၊ ပနက လခ မ˜ ခင
Home; ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းအခွန်ကောက်ခံမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုက Home; ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းအခွန်ကောက်ခံမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုက
သညအ ခနက စ ညကပမအ ရ က သင အ ခနမ ခ မ ပ ပ မ ည။ ၁၃ ။ ပ ညပန ငင ခ သ သမ ဟတ ပညပကမဏ ၏ ခသည မနမ ငင င အ ခနစ ထပ ၂၀၁၇ ခ စ ၊ ပည ထ င စ ၏ အခ န အ က က ဥပ ဒ ဤဥပ ဒတ င ပ ရ သ အ က ပ စက ရပ မ သည ဖ ပပ အတ င အဓ ပ ယ သက ရ က
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြညေ်ထာင်စု၏ပ အခနွအ် ေကာက် ဥပေဒ ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်စည်ဖြစ်ပါက ေရာင်းရေငွအေပါ်တွင် လည်းေကာင်း ယင်းတို့နှင့် ကျန ော့်အ ည် ှာ ဦး းအအှာင် (ါ) Kanhaiya Lal Verma ဖြစ်ပါတ်။ ကျန ော့် အ းအး် - vermakl@gmail.com
࠷ࠗ࠶࠽ ခࠧုႏ࠴စ࠰࠿ ဇࠨࠖࠥࠧင࠰ࠖ (࠷࠾)ࠕက࠰ࠩ ࡺ႔࠳င࠰ က࠱င࠰࠯ပ࠲ပࠫࠖࠧပ࠰ခࠪ࠮ࠩ࠘ࠤ ုႏ࠴စ࠰ပ႔࠰္ࠖ࠰ အࠩထ࠳ࠩထ࠳ အစ္࠰࠯အࠩࠗ࠯ ࡁအ႔္࠰࠲ပࠫခࠪ࠮္࠘࠰࠮ ၁၂။ ဝ င ငအ ပ% မတည၍ တ ကခ ˝ကန ည ( In c o me Met h od )အ ရ အသ တ ငထ တ လ ပ မ တန ဖ တ က ခ ˝ကရ န အ ခခ စ ပ ရပ စ မ အ ကပ0အတင ဖ စပ0သည။ စပ ရပ စ အ ဖ င
ခ စ ရပ က အ က ဖ ပပ ရ ဂ လက ဏ မ အ ခ စ ရ င ပ သည ။ အက ဆက မ မ ဖစ ပ စ ရ အတ က အ က ပ အခ က မ က လ က န ကပ ရန ကျန ော့်အ ည် ှာ ဦး းအအှာင် (ါ) Kanhaiya Lal Verma ဖြစ်ပါတ်။ ကျန ော့် အ းအး် - vermakl@gmail.com
အ က င အရ ။ အပငမ သစအ ဖစ အသ အ မ တ ပ လကမ တ လ˘ ကထ ခင ။ ရနအတက လလ ကသ မ စ ပမ ဏက အခ န မပ ပ ၍ သတမတထ သ စမ သပစကပ ခက (Myan).pdf Author: sansanmyint စ ည်း ကပ ်မ အ ရေငွသ ွင ်း ခ ျ လ န်ပ တ ခ (က သခ ) - ၁၉ ။
အႏွစ ္ခ်ဳပ္စာတ မ္း မ်ား အ သ ံုး ျ ပ ဳမ ႈက ို အေျ ခ ျ ပ ဳသ ည့္ ရ ွင ္း လ င ္း မ ႈမ ရ ွိေ သာျ မ ိဳ႕ေ တ္ာအ ခ ြန ္ေ ကာက္ ခ ံသ ည့္ စ န စ္သ ည္ ူသ ၿ့္္ၿရ္၉ ကးးးၭက ြ္းပြ့္္ူး တ ြ္းဆ ာၿပၿ းူနွြ့္္ူကၬြန္း တ ္တ ာ႔၍ူးူး ါး ပ ူစ စ ူြက္စ တၿ္းၿ းူ ပ ၮ န္ၮအြ္းကာindot ၿွူကတရီး ဆ ြ္ူ